May 26, 2020 - Lupyo News
တဈနကေို့ကွကျဥနှဈလုံး ပုံမှနျစားပေးရုံနဲ့ ရလာမယျ့ အံ့မခနျး အကြိုးကြေးဇူးမြား…
May 26, 2020 by Lupyo News
တစ်နေ့ကိုကြက်ဥနှစ်လုံး ပုံမှန်စားပေးရုံနဲ့ ရလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ… ကြက်ဥဟာ အလွယ်တကူစားလို့ရတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး ဈေးလည်းချိုတာကြောင့် လူတိုင်းစားနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်စားလို့ရတဲ့ ကြက်ဥကို တစ်နေ့နှစ်လုံးမှန်မှန်စားပေးခြင်းက ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူက လူအနည်းစုပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ နေ့စဉ်ကြက်ဥနှစ်လုံးမှန်မှန်စားပေးရုံနဲ့ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၁) မျက်လုံးအားကောင်းလာစေတယ်။ ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ lutein လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးက မျက်စိအမြင်ကြည်လင်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့် နေ့စဉ်ကြက်ဥနှစ်လုံး ပုံမှန်စားပေးတဲ့အခါ မျက်စိအမြင် အာရုံတိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ် …။ (၂) အရိုးနဲ့သွားတွေကို သန်မာစေတယ်။ ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် ဒီ က ကယ်လ်စီယမ်ကိုစုပ်ယူဖို့အားပေးတာကြောင့် တစ်နေ့ကို ကြက်ဥနှစ်လုံးစားပေးရင် အရိုးနဲ့သွားတွေကို အထူး သန်မာစေပါတယ် …။ (၃) အသားအရေ၊ဆံပင်နဲ့ အသည်းကို ကျန်းမာစေတယ်။ … Read more
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့ ဆရာမကိစ္စကို အသေးစိတ်သိရှိသူတစ်ယောက်မှ ဖော်လိုက်ပါပီ။ ဖြစ်စဉ်အမှန်က ဒီလိုပါ……..
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့ ဆရာမကိစ္စကို အသေးစိတ်သိရှိသူတစ်ယောက်မှ ဖော်လိုက်ပါပီ။ ဖြစ်စဉ်အမှန်က ဒီလိုပါ…….. ရွှေအုပ်ဂူကျောင်းဆိုတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံး ယခုလက်ရှိ မြို့နယ်သံဃနာယကရဲ့ လက်ထက်မှသာ ယတိပြတ် အမှုပြီးပျက်ခဲ့တာပါ။ အမှုပြီးပျက်တဲ့အခါ အရင်မတရား ကျူးကျော် ဝင်နေတာတွေ အကုန်ထွက်ပေးရတယ်။ ဘက ကိုအမှီပြုပြီး ကျောင်းဘေးမှာ စီးပွားရှာနေတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေရဲ့ ဝင်ငွေ ကို ကျောင်းအတွင်းသို့ မရောက်ပဲ လေလွင့်ခဲ့ တာတွေကို ယခု လက်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတျောက သေချာ ပြန်လုပ်တဲ့အခါ တချို့သူတွေ စားပေါက်တွေ ပိတ်ကုန်တယ်။ အဒါငွေတွေကို ဘယ်သူစီရောက်နေလဲ ဘသူကိုပေးရလဲ ဆိုတာ ဆိုင်းခန်းကသူတွေ အသိဆုံးပါ။ တချို့သူတွေ ကသူတို့စားပေါက်ပိတ်လို့ အငြိုးများစွာနဲ့ တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ ယခု အမျိုးသမီးကလဲ ကျောင်းရဲ့ဝင်ငွေတွေ များစွာကို မတရားသုံးထားပြီး … Read more
အမျိုးသမီးတွေ သဘောအကျတဲ့ အမျိုးသားတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဘာတွေလဲလို့ အမျိုးသားတွေကို မေးရင် မျက်နှာ၊ တင်ပါး၊ ရင်ဘတ်၊ ခြေထောက်၊ မျက်လုံး၊ အပြုံး စသည် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့အမြင်မေးကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်အမျိုးသားမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေက… ၁။ ကြွက်သား ကာယဗလလေ့ကျင့်သူတွေမှာ ရှိသလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်လေးကို အမျိုးသမီးများ အကြိုက်ဆုံးလို့ အမျိုးသားများ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီး ၁၀% ခန့်သာ အဲဒီလိုကြွက်သားတွေကို သဘောကျပြီး ၅၀% က သာမှန်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ အမျိုးသားတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ ၂။ လက်မောင်းနဲ့ ပခုံး အမျိုးသမီးအများစုက ပုခုံးကျယ်ကျယ်နဲ့ သန်မာတဲ့ လက်မောင်းတွေ လိုချင်ကြတယ်။ ၃။ တင်ပါး … Read more
တိုက်စစ်မှူး မောင်မောင်လွင် ကို ကာမ လိမ်လည် ရယူမှု (ပုဒ်မ ၄၁၇) နဲ့ တရားစွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ခင်ငြိမ်းချမ်း
တိုက်စစ်မှူး မောင်မောင်လွင် ကို ကာမ လိမ်လည် ရယူမှု (ပုဒ်မ ၄၁၇) နဲ့ တရားစွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ခင်ငြိမ်းချမ်း တိုက်စစ်မှုး မောင်မောင်လွင် ကို ကာမ လိမ်လည်ရယူမှုနဲ့ တရားစွဲ လိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ခင်ငြိမ်းချမ်း (ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ထားခဲ့တာတော့ မကောင်းပါဘူး)) မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား တိုက်စစ်မှူး မောင်မောင်လွင် ကို ကာမလိမ် လည်ရယူမှု(ပုဒ်မ ၄၁၇)နဲ့တရားစွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ခင်ငြိမ်းချမ်း မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား မောင်မောင်လွင် ကို လိမ်လည်လက်ထပ်မှု(ပုဒ်မ ၄၁၇)နဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်…အခုကျွန်မမှာ သူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ဘက်က လာဆွေးနွေးတာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး…လို့ပြောလာပါတယ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား မောင်မောင်လွင် ကို လိမ်လည် လက်ထပ်မှု(ပုဒ်မ ၄၁၇)နဲ့ တရားစွဲ … Read more
ထီဖွင့်ခါနီးလို့ မိမိတို့လက်ဖ၀ါးမှာ ဒီသင်္ကေတလေးပါနေလား စစ်ကြည့်ပါအုံး
ထီဖွင့်ခါနီးလို့ မိမိတို့လက်ဖ၀ါးမှာ ဒီသင်္ကေတလေးပါနေလား စစ်ကြည့်ပါအုံး သင် ဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ တစ်ချို့ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ဖြစ်မလာတဲ့ ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ် …။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ X ရဲ့အဓိပ္ပာယ် – ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြချင်တာကတော့ မင်းဟာ ပြိုက်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ရုရှား STI တက္ကသိုလ်မှပညာရှင်များ လေ့လာချက်အရ လူတွေရဲ့လက္ခဏာဖွဲ့စည်းပုံဟာ ရှုပ်ထွေးပေမယ့် များသောအားဖြင့် ဒီလို Xပုံစံပါတဲ့ လူတွေဟာ ပြိုင်စံရှားဖြစ်သလို အထင်ကရလူတွေအဖြစ်လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ် …။ … Read more
ဆီးဖွူသီးလေးတှရေရငျ သိမျးထားပါ ရောဂါပေါငျး ၆၁ မြိုးအတှကျ ဆေးဘကျဝငျတဲ့ ဆီးဖွူသီး ( တနျဖိုးရှိတဲ့ ပို့လေးမို့သိမျးထားလိုကျပါ ) ( ၁ ) ဒူလာသှေးဝမျးပကျြရောဂါအတှကျ ဆီးဖွူသီးခွောကျကို ငါးရှဉျ့နှငျ့ ခကျြစားရသညျ ၊ ( ၂ ) အရေးပွားတှငျ ဖွဈတတျသော ယားနာ၊ပှေး၊ညငျး၊တငျးတိပျမြားအတှကျဆီးဖွူသီးခွောကျ(သို့)အစိုကိုသှေး၍ သံပုရာသီးအနညျးငယျထညျ့ပွီးလိမျးရသညျ ။ ( ၃ ) ဆီးခြိုရောဂါအတှကျ ဆီးဖွူ(သို့)မွဆေီးဖွူ ပဉ်စငါးပါးပွုတျသောကျရသညျ ၊ ( ၄ ) နှာခေါငျးသှေးလြုံလွငျးအတှကျ ဆီးဖွူသီးကို ကွိတျ၍ထိပျကအုံပေးရသညျ ။ ( ၅ )ဆီးပုပျရောကျဂါအတှကျ ဆီးဖွူသီးခွောကျမှုနျ့ကိုထနျးလကျြ၊မြားရညျ၊တကာနှငျ့နယျစားရသညျ ။ ( ၆ )သှေးဝမျးသှားလြှငျ ဆီးဖွူသီး အစိမျးကိုထောငျး၍ အရညျညဈယူပွီးသံပုရာရညျနှငျ့ သောကျရသညျ ။ ( … Read more
(၇) ရက် သားသမီးများ ကပ်ဘေးက လွတ်မြောက်အောင် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်….
(၇) ရက် သားသမီးများ ကပ်ဘေးက လွတ်မြောက်အောင် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်…. အခု အချိန်မှာ အားလုံး ကပ်ဘေးသဖွယ်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်ပါ…. အိမ်မှာပဲ နေကျပါ လက်ပုံမှန်ဆေးပါ…ရေးများများသောက်ပါ ဘုရားတရားလုပ်ကြပါ…. အိမ်မှာနေတုန်း စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ကြမယ်… အပြင်မထွက်ကြဘူးဆိုရင် အချိန်တန်ရင် ဒီကပ်ကြီးက ထွက်သွားမှာပါ… မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့တရားတော်ကို နာယူရင်း ဒီကပ်ကြီးလည်း ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်… အား လုံး ကျန်း ကျန်း မာ မာ နဲ့ ပြန် ဆုံ တွေ့ ကြ မယ် နော် မြန် မာ ပြည် ကြီး ငြိမ်း ချမ်း ပါ စေ.. ရှယ် ခြင်း ဖြင့် ကု သိုလ် … Read more
အမျိုးသမီးတွေ အမှတ်တမဲ့လုပ်မိနေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာများ…
အမျိုးသမီးတွေ အမှတ်တမဲ့လုပ်မိနေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာများ… (1) မိန်းမကိုယ်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်း လုံးဝ ဆပ်ပြာကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ ရေသီးသန့်နဲ့ ဆေးရင် လုံလောက်ပါပီ။ ဆပ်ပြာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်တွေက ပြင်းတာကြောင့်မိန်းမကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမွှေးနံ့ပါတဲ့ ဆပ်ပြာမျိုးတွေကို လုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး အင်္ဂါကို ဆေးကြောဖို့ အတွက် ရေတစ်ခုတည်းနဲ့တင် လုံလောက်မှု ရှိပါတယ်။ မိန်းမကိုယ် သန့်စင်ရည်တွေကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင်လည်း မနက်တစ်ကြိမ် ၊ ညတစ်ကြိမ်သာ သုံးပေးပါ ….။ (2) လစဉ်သုံး ပစ္စည်းကို မလဲဘဲ တစ်နေ့လုံး သုံးခြင်း အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလချိန်တွင် သုံးတဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာ အကြာကြီး မထားသင့်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၅နာရီခြားတစ်ခါ လဲဖယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဓမ္မတာလာချိန်မှာ … Read more
သရဲတောင်ငိုရတဲ့မိန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအလွန်ချစ်ကြတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံနိုင်လောက်အောင်ချစ်ကြပါသတဲ့။ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကလင်မယားတွေရဲ့စံပြစုံတွဲပါပဲတဲ့။တစ်နေ့တော့ယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာရုတ်တရက်ဆုံးသွားပါတယ်။မိန်းမဖြစ်သူဟာကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေပြီးယောင်္ကျားနောက်လိုက်မယ်လုပ်နေလို့အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ထားရပါသတဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအလွန်က်ိုသနားနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းမရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းယောင်္ကျားအလောင်းကိုမပုပ်သိုးအောင်လုပ်ပြီးအခေါင်းထဲထည့်သင်္ချိုင်းမှာအိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီး..မိန်းမနဲ့အတူထားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ မိန်းမဖြစ်သူဟာအစေခံ၂ယောက်နဲ့အတူယောင်္ကျားအလောင်းကြီးနဲ့သင်္ချိုင်းမှာပဲနေပါသတဲ့။မိန်းမဖြစ်သူဟာယောင်္ကျားအပေါ်ချစ်တတ်လွန်းသူကြီးဆိုပြီးနာမည်ကောင်းတွေရနေပါသတဲ့။လာကြည့်တဲ့သူတွေလည့်းနေ့စဉ်မပြတ်ပါဘူးတဲ့။ တစ်နေ့တော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘုရားကျောင်းကရတနာတွေကိုဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းခိုးယူတဲ့သူခိုး ၅ ယောက်ကိုဖမ်းမိပါသတဲ့။ဘုရင်ကမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင်ကားစင်မှာစို့ရိုက်သေဒါဏ်ပေးပြီးမြေမမြုပ်ဘဲထားပါသတဲ့။ နောက်လူတွေမလုပ်ရဲအောင်သင်္ချိင်းထဲမှာအလောင်းတွေကိုပြထားပါသတဲ့။အလောင်းတွေအပျောက်အချမရှိအောင်စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ကိုအစောင့်ထားခဲ့ပါသတဲ့။အလောင်းတွေမပျောက်စေရ။ပျောက်လျှင်သေဒဏ်လို့အမိန့်တော်ထားခဲ့ပါသတဲ့။ ညဘက်ရောက်တော့စစ်ဗိုလ်ဟာအလောင်းတွေလိုက်စစ်ရင်းသင်္ချိုင်းထဲကမိန်းမနေနေတဲ့အိမ်နားရောက်သွားပါသတဲ့။.အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းမဖြစ်သူဟာသူ့ယောင်္ကျားအခေါင်းဘေးမှာရပ်ပြီးငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဘယ်မျှချစ်ကြောင်း၊သတိရကြောင်းပြောပြောပြီးငိုနေပါတဲ့။မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကိုစွဲလမ်းစိတ်နဲ့သေခဲ့တဲ့ယောင်္ကျားဟာလည်းသူ့မိန်းမဘေးမှာပဲ..သရဲကြီးဖြစ်နေပါသတဲ့။ သရဲကြီးဟာမိန်းမဘေးမှာပဲတစ်ဖဝါးမှမခွာစောင့်ရှောက်နေပါသတဲ့။ဒိလိုဖြစ်နေတာကိုမိန်းမကသိပါသတဲ့။ညဆိုရင်အတူတူတောင်အိပ်ကြပါသတဲ့စစ်ဗိုလ်ဟာငိုနေတဲ့မိန်းမကိုမြင်မြင်ချင်းစွဲလမ်းသွားပါသတဲ့။ ညိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကမျက်စိထဲကကိုမထွက်ပါဘူးတဲ့။နောက်တစ်နေ့မှာတော့စစ်ဗိုလ်ဟာမိန်းမအိမ်နားလာပြီးသီချင်းဆိုပါသတဲ့။သီချင်းအဓိပ္ပါယ်ကသူများယောင်္ကျားတွေသေတာတောင်ကံကောင်းပုံ၊သေတာတောင်အနားလေးမှာနေခွင့်ရပုံ သူ့မှာတော့..မိန်းမသေတာတောင်.စစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလို့မရောက်ခဲ့ရပုံ၊ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပုံတွေကိုဖွဲ့နွဲ့ထားတာဖြစ်ပါသတဲ့။စစ်ဗိုလ်ဟာညတိုင်းညတိုင်းမိန်းမအိမ်နားလာပြီးသီချင်းဆိုပါသတဲ့။၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မ်ိန်းမဖြစ်သူဟာ သူ့အစေခံကို လွှတ်ပြီးစစ်ဗိုလ်ကိုခေါ်ခိုင်းပါသတဲ့။ အိမ်ထဲရောက်တော့ရှင့်မိန်းမကိုအတော်ချစ်တာပဲလားလို့မေးပါသတဲ့။စစ်ဗိုလ်ကဘယ်နဲ့မေးပါလိမ့်ဗျာကျုပ်မိန်းမကို ကျုပ်သိပ်ချစ်တာပေါ့မနက်ခင်းဆို..သူ့နဖူးလေးမွှေးပြီးကျုပ်န်ိုးတယ်။သူမျက်နှာသစ်တုန်းသနပ်ခါးလေးသွေးထားတယ်သူ့ဆံပင်လေးတွေကိုဆီလူးပြီးပြုပြင်ပေးတယ်။ဘုရားကိုအတူတူရှိခိုးတယ်။ထမင်းစားလဲအတူတူစားတယ်။ခွံကြွေးကြတယ်။ သူရေချိုးဖို့ ခပ်ပေးတယ်။တစ်ယောက်တစ်လှ့ည်ချေးတိုက်ပေးတယ်။ညအိပ်ရာဝင်ကာနီးရင်သူ့ဆံပင်တွေကိုပြန်ပြုပြင်ပေးတယ်။ဒီအချိန်ဆိုကျနော်တို့ ၂ယောက်သိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။ အိပ်ရာထဲမှာ..အဝှါ..လုပ်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာအဝှါလုပ်ကြတာလဲရှင့်ဟာ..ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး.—ပြောပါရှင် အိပ်ယာထဲမှာအဝှါလုပ်တယ်ဆိုတာက စကားထာဝှက်တာကိုပြောတာပါ။ဥပမာ..သူကကျွန်းတုံန်းကြောင်လျှောက်..လို့ပြောရင်ကျနော်ကလွမ်းတုန်းမောင်ရောက်လို့ဖြေရတာလေ။ မှတ်မှတ်ရရ. ကျနော်သူကိုမေးဘူးတယ်။စာကန်းမလေးတစ်ကောင်အစာကောက်နေတုန်းအထက်ကစာတစ်အုပ်ဖြတ်ပျံ့သွားတော့စာကန်းမလေးကအထကျကညံညံစာတစ်တစ်ရာသံထင့်လေးလို့မေးလိုက်တယ်။အထက်ကစာတွေကဒို့တူ၊ဒို့စိတ်၊ဒို့ဝက်..ညည်းကောမှစာ၁ရာလို့ပြန်ဖြေတယ်။အထက်ကပြန်သွားတာစာဘယ်နှစ်ကောင်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ သူအဖြေမရမချင်းစဉ်းစားတယ်သူအဖြေကိုရခဲ့ပါတယ်။အဖြေရလို့ပျော်နေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုအခုထိမြင်ယောင်နေဆဲပါဗျာ။ရှင် အတော်ကိုချစ်တတ်တာပဲနော်ဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်.ချစ်တတ်တာပေါ့ဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတုန်းအစေခံမလေးနှစ်ယောက်ကအိပ်သွားပါပြီ။သူတို့အနားမှာလူမသိသူမသိသရဲကြီးတစ်ကောင်ပဲရှိပါတော့တယ်။ မိန်းမကသူ့လက်ညှိုးထိပ်ကလေးကိုပါးစပ်နဲ့မထိတထိကိုက်ရင်းစစ်ဗိုလ်ကို မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ်ပြီးရှင့်မိန်းမကိုဂရုစိုက်သလိုကျမကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးလားလို့မပွင့်တစ်ပွင့်လေးမေးလိုက်ပါသတဲ့။ကိုယ်ရံတော်သရဲကြီးလန့်သွားတယ်။သဘောမတူကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့မီးတွေငြိမ်းပစ်တယ်။ စစ်ဗိုလ်ကမီးတွေပြန်ထွန်းမယ်လုပ်တော့မိန်းမက..မထွန်းနဲ့တော့တဲ့မဖီးမသင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ .ကျမဆံပင်လေးတွေကိုရှင်းပေးပါလားတဲ့ကျမပါးလေးကိုသနပ်ခါးလေးလူးပေးပါလားတဲ့အိပ်မပျော်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျမကို.နဖူးလေးအသာနမ်းပြီးချော့သိပ်ပါလားတဲ့။ သရဲကြီးသည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒေါသကြီးစွာနဲ့တခါးတွေကိုတဝုန်းဝုန်းဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်တယ်။လေတွေတဝေါဝေါတိုက်တယ်။အသံတွေပေးတယ်။တစ်အိမ်လုံးဗြောင်းဆန်နေအောင်ကြောက်မက်ဖွယ်ချိမ်းခြောက်တယ်။သရဲကြီးမှားသွားပြီ။မိန်းမကကြောက်ဟန်ဆောင်ပြီးစစ်ဗိုလ်ကိုအတင်းဝင်ဖက်တယ်။ပြီးတော့ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်တယ်။သူကတော့စစ်သားလေ၊သရဲလောက်တော့စာမဖွဲ့။ ယူကြုံးမရ၊ဒေါသကြီးစွာသောင်းကျန်းနေတဲ့သရဲကြီးရဲ့သောကဒေါသတွေအောက်မှာမိန်းမနဲ့စစ်ဗိုလ်တို့ကတော့အမှောင်ထုထဲကိုနက်သထက်နက်အောင်ပျော်ပျော်ကြီးတိုးဝင်နေကြလေရဲ့။မမြင်ရက်၊မကြည့်ရက်တဲ့သရဲကြီးအိမ်အပြင်ဘက်ကိုပူလောင်စွာပြေးထွက်လိုက်တယ်။ အိမ်ထဲကအသံတွေကသူ့အသဲကိုဓားနဲ့မွှန်းနေတာထက်ခံရဆိုးတယ်။ရင်ကွဲမတတ်အသံဆိုးကြီးနဲ့အော်တယ်။အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ခဲတွေပစ်ချတယ်။အစေခံနှစ်ယောက်ကြောက်လွန်းလို့အပြင်မထွက်ရဲ။သရဲကြီးကိုယ်တိုင်ဟိုနှစ်ယောက်အတွက်အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးနေသလိုလိုဖြစ်နေတာကိုသရဲကြီးစဉ်းစားမိပြီ။သရဲကြီးစဉ်းစားပြီ။လက်ကနဲအကြံတစ်ခုရပြီ။ဘုရင်ကအမိန့်တော်မှတ်ထားတာသူခိုးတစ်ယောက်အလောင်းပျောက်ရင်သေဒဏ်တဲ့။ တွေ့ပြီပေါ့ကွာငါ့မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ငနဲသေဖို့သာပြင်။ကားစင်တင်ထားတဲ့သူခိုးတစ်ယောက်အလောင်းကိုအစဖျောက်ရမယ်။လက်စလက်နမကျန်အောင်ဘာလုပ်မလဲ။စားပစ်ရမယ်။ဝါရင့်သရဲမဟုတ်တော့စားရတာမလွယ်။တစ်ညလုံးကြိုးစားပမ်းစား..စားလိုက်မှသရဲဗိုက်ကြီးသည်ဖြစ်မှတစ်လောင်းကုန်ရုံလေး။ မနက်လင်းတော့ပြသနာတက်ပြီ။တစ်ရေးမှမအိပ်ရသေးတဲ့စစ်ဗိုလ်အိမ်ထဲကထွက်ပြီးအလောင်းတွေလိုက်စစ်တယ်။တစ်လောင်းပျောက်နေတာတွေ့ပြီ။ကြောက်အားလန့်အားနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြေးတယ်။သရဲကြီးသိပ်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်။မင်း..ဘာတတ်နိုင်သေးလဲသူ့ဗိုက်ပူပူကြီးမနိုင့်တနိုင်သယ်ရင်းအိမ်ထဲလိုက်သွားတယ်။ စစ်ဗိုလ်ကအိပ်ရာထဲမှာမှိန်းနေတဲ့မိန်းမကိုနိုးရင်းအသဲလေးရေကိုယ်တော့သေဒဏ်အပေးခံရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်သူခိုးအလောင်းတစ်လောင်းပျောက်သွားလို့ဒါလေးများ..မောင်ရယ်..ဟိုအခေါင်းထဲကကျက်သရေမရှိတဲ့အလောင်းကိုထုတ်ပြီး ကားစင်မှာတင်သံပြန်စွဲထားလိုက်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါမောင် တဲ့သရဲကြီးပါးစပ်အဟောင်းသားအံ့သြချက်ကမ်းကုန်ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့သူမခုတော့စစ်ဗိုလ်ကသရဲကြီးအလောင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးကားစင်မှာပြန်တင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အ်ိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီးမိန်းမဘေးမှာပြန်အိပ်နေလိုက်တယ်။ မိန်းမကစစ်ဗိုလ်ရင်ခွင်ထဲပြန်တိုးဝင်လိုက်တယ်။သရဲကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့။ရှိက်ကြီးတငင်သာအော်ဟစ်ငိုရိုလိုက်ပါတော့တယ်။သူအချစ်ကြီးချစ်တဲ့မိန်းမကြောင့်သရဲကြီးငိုနေရပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မိန်းမရဲ့အိပ်ရာထဲမှာရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းပွင့်ပြီးသေနေတဲ့ပုတ်သင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သရဲတွေသေရင်ပုတ်သင်တို့ကင်းလိပ်ချောတို့အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားသတဲ့။ဒါဆိုသရဲကြီးရင်ကွဲနာကျပြီးသေတာပေါ့နော် ဒီပုံပြင်လေးကမိန်းကလေးတွေ..ယောင်္ကျားမာယာကိုသတိထားဖို့ယောင်္ကျားမိန်းမမည်သူမဆိုသရဲကြီးလိုအစွဲအလန်းမကြီးဖို့အရာရာဟာပုံသေတွက်ဆလို့မရဘူးဆိုတာအချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှည့်စားမှုအောက်မှာအရာရာဟာပြောင်းလည်းတတ်တယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ … မူရင်းတင်သူအားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ခက်ရစ်ဒစ်ပေးပါသည် =========== unicode သရဲတောငျငိုရတဲ့မိနျးမ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာကထူးဆနျးမှုတှနေဲ့ရှငျသနျနတေဲ့တိုငျးပွညျတဈပွညျမှာအလှနျခဈြကွတယျလို့ပတျဝနျးကငျြကသတျမှတျထားတဲ့လငျမယားနှဈယောကျရှိပါသတဲ့။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမကျြစိအောကျကအပြောကျမခံနိုငျလောကျအောငျခဈြကွပါသတဲ့။ အဲ့ဒီတိုငျးပွညျကလငျမယားတှရေဲ့စံပွစုံတှဲပါပဲတဲ့။တဈနတေ့ော့ယောင်ျကြားဖွဈသူဟာရုတျတရကျဆုံးသှားပါတယျ။မိနျးမဖွဈသူဟာကိုယျကိုကိုယျသတျသပွေီးယောင်ျကြားနောကျလိုကျမယျလုပျနလေို့အစောငျ့အရှောကျတှနေဲ့ထားရပါသတဲ့။ ပတျဝနျးကငျြကလညျးအလှနျကျိုသနားနကွေပါတယျ။နောကျဆုံးတော့မိနျးမရဲ့ဆန်ဒအတိုငျးယောင်ျကြားအလောငျးကိုမပုပျသိုးအောငျလုပျပွီးအခေါငျးထဲထညျ့သင်ျခြိုငျးမှာအိမျတဈလုံးဆောကျပွီး..မိနျးမနဲ့အတူထားခဲ့ပါတယျတဲ့။ မိနျးမဖွဈသူဟာအစခေံ၂ယောကျနဲ့အတူယောင်ျကြားအလောငျးကွီးနဲ့သင်ျခြိုငျးမှာပဲနပေါသတဲ့။မိနျးမဖွဈသူဟာယောင်ျကြားအပျေါခဈြတတျလှနျးသူကွီးဆိုပွီးနာမညျကောငျးတှရေနပေါသတဲ့။လာကွညျ့တဲ့သူတှလေညျ့းနစေ့ဉျမပွတျပါဘူးတဲ့။ တဈနတေ့ော့သူတို့ကိုးကှယျတဲ့နတျဘုရားကြောငျးကရတနာတှကေိုဝငျရောကျဖောကျထှငျးခိုးယူတဲ့သူခိုး ၅ ယောကျကိုဖမျးမိပါသတဲ့။ဘုရငျကမှတျလောကျသားလောကျဖွဈအောငျကားစငျမှာစို့ရိုကျသဒေါဏျပေးပွီးမွမေမွုပျဘဲထားပါသတဲ့။ … Read more
ပရုပ်လုံး သုံးတတ်သူများ အတွက် သတိပြုဖွယ်….
ပရုပ်လုံးသုံးတတ်တယ် အဝတ်အစားတွေထဲ ထည့်တတ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးဖတ်ပြီး သတိထားစေချင်တယ် ပရုပ်လုံး သုံးတတ်သူများ အတွက် သတိပြုဖွယ်…. ပရုပ်လုံးရဲ့ အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုံးပါးပါးပြီး အငွေ့ပျံတာ ပျံတဲ့အငွေ့တွေက ဓာတုဓာတ် နပ်ဖ်သလင်းနဲ့ပါရာဒိုင်က လိုရိုဘန်ဇင်း ဓာတ်တွေပါ …။ စူးစူးရှရှ နဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အငွေ့တွေက ကလေးငယ်နဲ့လူကြီး လူငယ် အားလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေ့ သဘောပါ …။ ဖြည်းဖြည်းချင်း သူလဲ လုံးပါး ပါးရင်း ကိုယ်လဲ ထိခိုက်နေတာပေါ့ – အနည်းနဲ့အများပဲ ကွာတယ် (သိတောင် မသိလိုက်ကြဘူး) အဲဒီ့အငွေ့တွေက မျက်စိ အသက်ရူလမ်းကြောင်း စတာတွေကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတယ် …။ ခေါင်းကိုက်တာ / မူးတာ / … Read more